Oita စီရင်စုရှိ Oyama ဆည်ကြီးကိုမော်ကြည့်နေတဲ့ 'Attack on Titan' manga ရဲ့ ဇာတ်ကောင်ရုပ်တုများ - JAPO Japanese News
ဂါ 01 Dec 2020, 17:46 ညနေ
နာမည်ကြီး manga ဖြစ်တဲ့ “ Attack on Titan” ကို Japo ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တို့သိပါသလား?
ဂျပန်မှာတော့ တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီလိုနာမည်ကြီးသလို ဒီ manga ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ အခုချိန်မှာတော့ ဒီ manga မှာပါတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် ၃ ဦးကို ရုပ်တုပုံသဏ္ဍာန်ထုလုပ်ပြီး “ Attack on Titan” ရဲ့ပရိသတ်တွေ အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ လှည်ပတ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်လည်း ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
နေရာကတော့ ဒီ manga ရဲ့ စာရေးဆရာဖြစ်သူ Hajime Isayama ရဲ့ဇာတိမြို့မှာဖြစ်ပြီး ရုပ်တုထားတဲ့နေရာကတကယ်ကို manga ထဲရောက်သွားသလိုမျိုး ခံစားရမယ့်နေရာမျိုးပါ။
Oita စီရင်စု Hita ရှိ Oyama ရေကာတာရဲ့ရှေ့ …
ဒါဟာ manga ထဲမှာပါတဲ့ ပုံရိပ်နဲ့တစ်ထပ်တည်းပါပဲ…..
အဓိကဇာတ်ကောင် ၃ ဦးရဲ့ရုပ်တုကို Oyama ဆည်ကြီးရဲ့ အောက်ခြေမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ကမှ အခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်ဆောင် Eren နဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ Mikasa နဲ့ Armin ရဲ့ငယ်ဘဝရုပ်တုတွေဖြစ်ပြီး လူသားတွေကိုဝါးမျိုးမယ့်အန္တရာယ်မှာ လူသားတွေကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းပါအရ အလွန်ကြီးမားတဲ့နံရံကြီးကိုမောကြည့်နေတဲ့သဖွယ် ပုံဖော်ထားပါတယ်။
လာရောက်လည်ပတ်သူတွေကလည်း စမတ်ဖုန်းထဲက augmented-reality (AR) app နဲ့ manga ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်း ဆည်ရဲ့ထိပ်မှာ Colossus Titan ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထည့်ပြီး ရိုက်ကူးကြတယ်။ ပျော်စရာပဲနော်…
ဒီပရောဂျက်အတွက် အနည်းဆုံးယန်း ၅ သောင်းထည့်ဝင်ကြတဲ့အလှူရှင်ပရိသတ်ပေါင်း ၁၇၄ ဦးအပါအဝင် လူပေါင်း၂၀၀ လောက် အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီရုပ်တုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Isayama က “ ဒီကလေး ၃ ဦးဟာ နံရံရဲ့အပြင်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့အရာ၊လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့သရုပ်မှန်ကို မျက်နှာမူနေပြီး သူတို့ဟာကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကို ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်တယ်” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြင် စာရေးဆရာဖြစ်သူက အမှန်တကယ်သူဟာ ဒီနေရာမှာမကြီးပြင်းလာခဲ့ဘူးဆိုရင် ‘Attack on Titan’ ဟာဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူလုပ်ခဲ့တဲ့အနုပညာကလည်း သူ့မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ Oyamamachi, Hita နဲ့ Oita ကို လူတွေစိတ်ဝင်စားပြီး လာရောက်လေ့လာဖို့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
တကယ်ကတော့ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့ကတည်းက ‘Attack on Titan’ ရဲ့အနုပညာရုပ်တုပြုလုပ်ဖို့အစီအစဥ်ဆွဲခဲ့ကြပေမဲ့ ရုတ်တရက်ကျရောက်လာတဲ့ ကပ်ရောဂါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အစီအစဥ်မဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ သို့သော် manga ချစ်သူတွေကတော့အရှုံးမပေးဘဲ အိပ်မက်တွေကိုသေချာပေါက်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
ကဲ.. JAPO ပရိသတ်တို့ရော ဒီ manga ရဲ့ animation ကိုကြည့်ပြီးပြီလား?
အသံနဲ့တင် လူတွေကို ရယ်အောင်လုပ်နိုင်တာလား ?
Sushi နှင့် Pokemon တို့ရဲ့တူနေတဲ့အရာတစ်ခုက?